Ulwazi lokuvikela ubhubhane abanye abantu asebevele basebenzile noma kungekudala abazosebenza ngalo, ekuqubukeni kwamanje okufanele bakwenze? 1. Ungayigqoka kanjani ngokufanele imaski yokuhlinza esendleleni eya emsebenzini.Zama ukungasebenzisi izithuthi zomphakathi, kunconyelwa ukuhamba, ukuhamba ngebhayisekili noma ukuthatha imoto yangasese, ibhasi elihamba ngezinyawo ususebenza.Uma kufanele usebenzise izithuthi zomphakathi, qiniseka ukugqoka imaskhi ngaso sonke isikhathi.Zama ukugwema ukuthinta izinto ebhasini.
2, ukuthi ungangena kanjani esakhiweni ngaphambi kokungena esakhiweni sehhovisi ukwamukela ukuhlolwa kwezinga lokushisa, izinga lokushisa lijwayelekile lingangena esakhiweni, ligeze izandla liqonde endlini yokugezela. Uma izinga lokushisa lomzimba lidlula ama-37.2 ℃, sicela ungangeni esakhiweni somsebenzi , futhi uye ekhaya ukubonwa nokuphumula. Uma kunesidingo, iya esibhedlela ukuyokwelashwa.
3. Gcina indawo yehhovisi ihlanzekile futhi ingena umoya imizuzu engama-20 kuya kwengama-30 kathathu ngosuku. Uyacelwa ukuthi uhlale ufudumele lapho ungena umoya.Ketha ibanga elingaphezu kwemitha eli-1 phakathi kwabantu, futhi ugqoke imaski lapho abantu abaningi besebenza.Keep ukugeza izandla nokuphuza amanzi njalo.Izinhlangothi zokwamukela zifaka imaski.
4. Kunconywa ukugqoka imaskhi futhi ugeze izandla ngaphambi kokungena egumbini lokuhlangana. Isikhathi sokuhlangana sabasebenzi singaphezu kwemitha eyi-1. Yehlisa ukuhlangana kwemihlangano, lawula isikhathi somhlangano, isikhathi somhlangano mude kakhulu, vula umoya omncane wewindows 1 .Indawo kanye nefenisha kumele kubulawe amagciwane ngemuva komhlangano.Izinto ezisethiwe ziyanconywa ukuthi zibulawe amagciwane ngokufaka emanzini abilayo.
5. Ihholo lokudlela lamukela izidlo ezihlukile ukugwema abasebenzi abaminyene.Indawo yokudlela iyahlanzeka kanye ngosuku, futhi amatafula okudlela nezihlalo kubulawa amagciwane ngemuva kokusebenzisa.I-Tableware kumele inanyathiselwe.Kusebenze igumbi lokusebenzela lihlanzekile futhi lomile. Ungakuhlanganisi ukudla okuluhlaza nokudla okuphekiwe. Gwema inyama eluhlaza.Suggest umsoco wokudla wokudla, ukhilimu omncane kasawoti ukunambitheka.6. Gqoka imaski yokuhluza elahliweyo lapho usendleleni usuka emsebenzini. Geza izandla zakho bese ukhipha isibulala-magciwane kuqala ngemuva kokukhipha imaskhi ekhaya. Sula ifoni nezikhiye ngosizi olungenalo oyilo noma u-75% utshwala.Kusebenzisa igumbi lingene futhi lihlanzekile, gwema abantu abaningi ukuthi bahlangane.
7. Phuma ugqoke imaski ukugwema izixakaxaka eziminyene.Sebenzisa ibanga elingaphezu kwemitha eyi-1 ukusuka kubantu futhi ugweme ukuhlala ezindaweni zomphakathi isikhathi eside.
8. Phakamisa imisebenzi efanelekile nokulinganiselayo ngesikhathi somsebenzi nokuphumula ukuze uqinisekise impilo enhle.
9. Izindawo zomphakathi kumele zihlanzwe nsuku zonke ezindaweni zokuhlanza izidumbu, umphetho, igumbi lokuhlangana, ilifti, izitebhisi, izindlu zangasese nezinye izindawo zomphakathi, bese kuthi lapho sekusetshenziswa izithako zokuhlanza zisetshenziswe ngangokunokwenzeka. ukuxuba.
10. Kunconywe ukusula isibambo esingaphakathi nangomnyango semoto ekhethekile ohambweni olusemthethweni ngotshwala abangama-75% kanye ngosuku. Thatha ibhasi elivaliwe ukugqoka imaskhi, kunconyelwa ukuthi ibhasi elivaliwe ekusetshenzisweni kotshwala abangama-75% ingaphakathi lemoto nesibambo somnyango kusula ukubulala amagciwane.
I-11, i-logistic canteen ukuthenga abasebenzi noma abaphakeli kumele bagqoke imaski kanye namagilavu ​​enjoloba alahlwayo, bagweme ukuxhumana ngqo nenyama nezinto zokupheka zezinkukhu, ukugeza izandla okufika lapho sekuhlanjwa amagciwane ngemuva kokusebenzisa amagilavu. abasebenzi kumele bagqoke imaski ukuze basebenze, futhi bacele ngokungathi sína futhi babhalise isimo sabasebenzi bangaphandle, bathola umbiko ongajwayelekile wesikhathi esifanele.
12, vakashela okusemthethweni ukuthi kufanele ukwenze kanjani kufanele ugqoke imaski.Ngaphambi kokungena esakhiweni sehhovisi, thatha isivivinyo sokushisa bese wethula umlando wokuvezwa kwe-hubei nezimpawu ezinjengomkhuhlane, ukukhwehlela kanye ne-dyspnea.Ngokungabikho kwale mibandela engenhla, nomzimba lokushisa kuzimo ezijwayelekile ezingama-37.2 °, lingangena ebhizinisini lokwakha.
Hlamba izandla ngaphambi nangemuva kokudlula amaphepha, bese ugqoka imaski lapho kudlula imibhalo.14, ukubulala amagciwane ngocingo ukuthi ungakwenza kanjani ukuncoma izingcingo ezi-landline ezingama-75% usule kabili ngosuku, uma zisetshenziswa kaningi zingandiswa ngendlela efanele.